မြန်မာအကျပ်အတည်း ဆွေးနွေး အဖြေရှာဖို့ PPST တိုက်တွန်း
PPST အွန်လိုင်းအစည်းအဝေး (ဓာတ်ပုံ-NCA S-EAO/fb)
NCA တနိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်ရေးစာချုပ် လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPST အနေနဲ့ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ အကြပ်အတည်း ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးအဖြေရှာကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ မနေ့ပြီးခဲ့တဲ့ လေးရက်ကြာ PPST ရဲ့ အင်တာနက် အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးမှာ ယာယီအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်ဆစ် နုတ်ထွက်ပြီး မွန်ပြည်သစ်ပါတီရဲ့ ဒုတိယဥက္ကဌနိုင်အောင်မင်း ဦးဆောင်တဲ့ စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်လာရာမှာ ဘာတွေထူးခြားမှုရှိပါသလဲ။ မြန်မာအကြပ်အတည်းဖြေရှင်းရေးဘာတွေလုပ်ဆောင်ဖို့ ရှိပြီး လက်ရှိ NCA အနေအထားကဘယ်လိုရှိပါသလဲ။ PPST ပြောခွင့်ရ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင် နိုင်အောင်မငေး ကို ကိုဝင်းမင်း က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
နိုင်အောင်မငေး ။.။ အထူးခြားဆုံးကတော့ နိုင်ငံရေးပြသာနာကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်ပေးဖို့ရယ်။ ဒီလိုအင်အားသုံးဖြေရှင်တာကို နောက်ဆုံးရလဒ်ကောင်းမထွက်ရှိဘူးလို့ သဘောထားချမှတ်တာပေါ့နော်။ ဒါ NCA ရဲ ချမှတ်ထားတဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုကို ဆက်လက်စွဲစွဲမြဲမြဲဆုပ်ကိုင်သွားမယ်။ ဆက်လက်ပြီး NCA လက်မှတ်ထိုးထားတုံးက အသိသက်သေဖြစ်ထားခဲ့ကြတဲ့ အာဆီယံ၊ ဥရောပ၊ တရုတ် စတဲ့နိုင်ငံတွေကနေ ဆက်ပြီး အနှစ်သာရကို ချည်းကပ်သွားမယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။.။ ဒီနေရာမှာ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းကို ပြေလည်နိုင်အောင် NCA ရဲ့ အနှစ်သာရကို အခြေခံပြီး ဆွေးနွေးရေးကို ဒီနိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အနှစ်သာရကို အခြေခံမယ်ဆိုတာ ဘာကို ပြောချင်တာပါလိမ့်။
နိုင်အောင်မငေး ။. ။ အနှစ်သာရကို အခြေခံမယ်ဆိုတာ အင်အားသုံးဖြေရှင်းတာဟာ ရလဒ်ကောင်မထွက်ဘူး ။ ဝိုင်းဝန်ဖြေရှင်းမှပဲ ရလဒ်ကောင်းထွက်နိုင်မယ်။ ဒါကိုလည်း ဒါကိုလည်း အခုလောလောဆယ်အနေနဲ့က NCA စာချုပ်ထဲမှာ အချက်အလက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးချက်တွေ၊ စစ်ရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်တွေ ကြားကာလ ဆွေးနွေးချက် ဒါကိုလည်း ဆုပ်ကိုင်လုပ်ဆောင်သွားမယ်။ အခုလောလောဆယ်အနေနဲ့ စစ်ကောင်စီ အနေနဲ့ကတော့ ကျနော်တို့ PPST အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုမလုပ်ဘူး။ ဆိုင်းငံထားမယ်။ ဒါပေမယ့် ပါတီတခုချင်းအနေနဲ့ သူပါတီရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ Bilateral ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ချင်ရင်လည်း လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သဘောထားမှတ်ချက်ရှိပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။ ။ ဒီနေရာမှာ အဓိကကတော့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး နဲ့ လက်ရှိအကြပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းဖို့ပေါ့နော်။ ဘယ်လိုမျိုး ရောက်လာအောင်လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားလဲ။
နိုင်အောင်မငေး ။. ။ အခုနက ကျနော်ပြောထားသလိုပဲပေါ့နော်။ ကျနော်တို့ လက်မှတ်ရေးထိုးထားတုံးက အသိသက်သေ နိုင်ငံတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒါကို ချည်းကပ်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ၂ဖက်ပေါ့။ အမြင်တွေတူညီရအောင် နိုင်ငံရေးပြသာနာကို နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးဖို့ ၂ ဖက်လုံးကို ချည်းကပ်ကြမယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။.။ ၂ ဖက်ကို ချည်းကပ်မယ်ဆိုတာ
နိုင်အောင်မငေး ။. ။ စစ်ကောင်စီ နဲ့ NUG အစိုးရပေါ့နော်။
ကိုဝင်းမင်း ။.။ အဲတော့ တိုက်ပွဲတချို့ကလည်း ဒေသတချို့မှာပေါ့နော်။ NCA အနေအထားကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားတာရှိလဲ။
နိုင်အောင်မငေး ။.။ ဒါက အခြေခံတခုမှာတော့ တချိန်မှာ ရုပ်လုံးပေါ်လာမှာပါ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒီနေရာမှာ နောက်တခုက NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပေါ့။ ဘုံသဘောထားရပ်တည်ချက်မျိုး ထုတ်ပြန်မယ်လို့ PPST ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဆွေးနွေးမှုအနေအထားတွေကရော ဘယ်လိုရှိခဲ့ပါလဲ။
နိုင်အောင်မငေး. ။. ။ ကျနော်တို့ရဲ NUG ရဲ့ ကြေညာစာတမ်းတွေထုတ်တယ်။ ဒီအပေါ်မှာ ဒီအပေါ်မှာလည်း ကျနော်တို့ အပြန်အလှန်သုံးသပ်တယ်။ နိုင်ငံတော်ကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်လဲ။ ဖက်ဒရယ်ကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲပေါ့။ အခြေခံမူသဘောထားအပေါ်မှာများတယ်ပေါ့လေ။ ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။ အဲဒီအပေါ်မှာတော့ ကျနော်တို့နဲ့ သဘောတူညီမှုရှိတယ်။ လုပ်ငန်းအကောင်ထည်ဖော်မှုမှာ ကျနော်တို့နဲ့ မတူကွဲပြားမှုရှိတယ်။ CRPH ကနေ ဦးစီးဦးဆောင်မှုလုပ်တာက သိပ်မတူဖူးပေါ့နော်။ ကျနော်တို့တွေးမြင်တာနဲ့ မတူတော့ ကျနော်တို့ အပြန်လှန်သုံးသပ်နေတယ်။ ကျနော်တို့ ပါတီတခုချင်းစီမှာလည်း ချပြနေတယ်။ NUG လုပ်ရပ်ပေါ်မှာ ကျနော်တို့လေးစားတယ်။ တခြားကိစ္စကို ဆွေးနွေးသွားရအုန်းမှာပေါ့နော်။
ကိုဝင်းမင်း ။.။ ဒီနေရာမှာ စုပေါင်းဦးဆောင်မှုနေရာမှာ အဓိကအဖွဲ့အစည်း တခုဖြစ်တဲ့ KNU အဖွဲ့အစည်း ကိုမတွေ့ရပါဘူး။ အရင်က KNU က ဦးဆောင်မှုယူခဲ့ပြီး နောက် ရှမ်းက ဦးဆောင်မှုယူခဲ့ရတာပေါ့။ အခု စုပေါင်းဦးဆောင်မှုမှာ ရှမ်းကတော့ ပြန်ပါလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကရင်ကို မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်။ ဘယ်လိုအနေအထားဖြစ်တာပါလ်ိမ့်။
နိုင်အောင်မငေး ။.။ အစတုံးက ကျနော်တို့ PPST စုဖွဲ့တုံးက KNU ကနေ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တာဝန်ယူခဲ့တယ်။ ဒုတိယတခါ RCSS ဆက်လက်တာဝန်ယူခဲ့တယ်။ အခုတခါ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ကို သူတို့တာဝန်ပေးချင်တယ်။ နောက်တခုက စုဖွဲ့မှုပုံစံကို သူတို့ပါတီထဲမှာ တင်ပြသွားမယ်။ဒါကြောင့်မပါဝင်နိုင်သေးတာပါ။
ကိုဝင်းမင်း ။.။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
NCA တနိုငျငံလုံး အပဈရပျရေးစာခြုပျ လကျမှတျထိုးထားတဲ့ လကျနကျကိုငျအဖှဲ့တှရေဲ့ ငွိမျးခမျြးရေး လုပျငနျးစဉျဦးဆောငျအဖှဲ့ PPST အနနေဲ့ လကျရှိမွနျမာနိုငျငံ အကွပျအတညျး ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးအဖွရှောကွဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။ မနပွေီ့းခဲ့တဲ့ လေးရကျကွာ PPST ရဲ့ အငျတာနကျ အှနျလိုငျးအစညျးအဝေးမှာ ယာယီအဖှဲ့ ခေါငျးဆောငျဟောငျး ဗိုလျခြုပျကွီး ယှကျဆဈ နုတျထှကျပွီးမှနျပွညျသဈပါတီရဲ့ ဒုတိယဥက်ကဌနိုငျအောငျမငျး ဦးဆောငျတဲ့ စုပေါငျးခေါငျးဆောငျမှုအဖှဲ့ဖွဈပျေါလာရာမှာ ဘာတှထေူးခွားမှုရှိပါသလဲ။ မွနျမာအကွပျအတညျးဖွရှေငျးရေးဘာတှလေုပျဆောငျဖို့ ရှိပွီး လကျရှိ NCA အနအေထားကဘယျလိုရှိပါသလဲ။ PPST ပွောခှငျ့ရ မှနျပွညျသဈပါတီ ဗဟိုအလုပျအမှုဆောငျ အဖှဲ့ဝငျ နိုငျအောငျမငေး ကို ကိုဝငျးမငျး က ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
နိုငျအောငျမငေး ။. ။ အထူးခွားဆုံးကတော့ နိုငျငံရေးပွသာနာကို နိုငျငံရေးနညျးနဲ့ ဖွရှေငျပေးဖို့ရယျ။ ဒီလိုအငျအားသုံးဖွရှေငျတာကို နောကျဆုံးရလဒျကောငျးမထှကျရှိဘူးလို့ သဘောထားခမြှတျတာပေါ့နျော။ ဒါ NCA ရဲ ခမြှတျထားတဲ့ ဖကျဒရယျဒီမိုကရစေီ ပွညျထောငျစုကို ဆကျလကျစှဲစှဲမွဲမွဲဆုပျကိုငျသှားမယျ။ ဆကျလကျပွီး NCA လကျမှတျထိုးထားတုံးက အသိသကျသဖွေဈထားခဲ့ကွတဲ့ အာဆီယံ၊ ဥရောပ၊ တရုတျ စတဲ့နိုငျငံတှကေနေ ဆကျပွီး အနှဈသာရကို ခညျြးကပျသှားမယျဆိုတာ ကနြျောတို့လုပျဆောငျကွပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒီနရောမှာ လကျရှိနိုငျငံရေးအကွပျအတညျးကို ပွလေညျနိုငျအောငျ NCA ရဲ့ အနှဈသာရကို အခွခေံပွီး ဆှေးနှေးရေးကို ဒီနိုငျငံတကာ အသိုငျးအဝိုငျးတှနေဲ့ ပူးပေါငျးပွီး အနှဈသာရကို အခွခေံမယျဆိုတာ ဘာကို ပွောခငျြတာပါလိမျ့။
နိုငျအောငျမငေး ။. ။ အနှဈသာရကို အခွခေံမယျဆိုတာ အငျအားသုံးဖွရှေငျးတာဟာ ရလဒျကောငျမထှကျဘူး ။ ဝိုငျးဝနျဖွရှေငျးမှပဲ ရလဒျကောငျးထှကျနိုငျမယျ။ ဒါကိုလညျး ဒါကိုလညျး အခုလောလောဆယျအနနေဲ့က NCA စာခြုပျထဲမှာ အခကျြအလကျတှအေမြားကွီးရှိတယျ။ နိုငျငံရေးဆှေးနှေးခကျြတှေ၊ စဈရေးဆိုငျရာ ဆှေးနှေးခကျြတှေ ကွားကာလ ဆှေးနှေးခကျြ ဒါကိုလညျး ဆုပျကိုငျလုပျဆောငျသှားမယျ။ အခုလောလောဆယျအနနေဲ့ စဈကောငျစီ အနနေဲ့ကတော့ ကနြျောတို့ PPST အနနေဲ့ နိုငျငံရေးဆှေးနှေးမှုမလုပျဘူး။ ဆိုငျးငံထားမယျ။ ဒါပမေယျ့ ပါတီတခုခငျြးအနနေဲ့ သူပါတီရဲ့ လိုအပျခကျြအရ Bilateral ဆှေးနှေးပှဲလုပျခငျြရငျလညျး လုပျနိုငျတယျဆိုတာ သဘောထားမှတျခကျြရှိပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။ ။ ဒီနရောမှာ အဓိကကတော့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးရေး နဲ့ လကျရှိအကွပျအတညျးကို ဖွရှေငျးဖို့ပေါ့နျော။ ဘယျလိုမြိုး ရောကျလာအောငျလုပျဖို့ ပွငျဆငျထားလဲ။
နိုငျအောငျမငေး ။. ။ အခုနက ကနြျောပွောထားသလိုပဲပေါ့နျော။ ကနြျောတို့ လကျမှတျရေးထိုးထားတုံးက အသိသကျသေ နိုငျငံတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ။ အဲဒါကို ခညျြးကပျပွီးတော့ ကနြျောတို့ ၂ဖကျပေါ့။ အမွငျတှတေူညီရအောငျ နိုငျငံရေးပွသာနာကို နိုငျငံရေးအရ ဆှေးနှေးဖို့ ၂ ဖကျလုံးကို ခညျြးကပျကွမယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ၂ ဖကျကို ခညျြးကပျမယျဆိုတာ
နိုငျအောငျမငေး ။. ။ စဈကောငျစီ နဲ့ NUG အစိုးရပေါ့နျော။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အဲတော့ တိုကျပှဲတခြို့ကလညျး ဒသေတခြို့မှာပေါ့နျော။ NCA အနအေထားကို ဘယျလိုသတျမှတျထားတာရှိလဲ။
နိုငျအောငျမငေး ။. ။ ဒါက အခွခေံတခုမှာတော့ တခြိနျမှာ ရုပျလုံးပျေါလာမှာပါ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒီနရောမှာ နောကျတခုက NUG အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရပေါ့။ ဘုံသဘောထားရပျတညျခကျြမြိုး ထုတျပွနျမယျလို့ PPST ရဲ့ ခေါငျးဆောငျဟောငျး ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီဆှေးနှေးမှုအနအေထားတှကေရော ဘယျလိုရှိခဲ့ပါလဲ။
နိုငျအောငျမငေး. ။. ။ ကနြျောတို့ရဲ NUG ရဲ့ ကွညောစာတမျးတှထေုတျတယျ။ ဒီအပျေါမှာ ဒီအပျေါမှာလညျး ကနြျောတို့ အပွနျအလှနျသုံးသပျတယျ။ နိုငျငံတျောကို ဘယျလိုတညျဆောကျလဲ။ ဖကျဒရယျကို ဘယျလိုတညျဆောကျမလဲပေါ့။ အခွခေံမူသဘောထားအပျေါမှာမြားတယျပေါ့လေ။ ဘယျလိုတညျဆောကျမလဲ။ အဲဒီအပျေါမှာတော့ ကနြျောတို့နဲ့ သဘောတူညီမှုရှိတယျ။ လုပျငနျးအကောငျထညျဖျောမှုမှာ ကနြျောတို့နဲ့ မတူကှဲပွားမှုရှိတယျ။ CRPH ကနေ ဦးစီးဦးဆောငျမှုလုပျတာက သိပျမတူဖူးပေါ့နျော။ ကနြျောတို့တှေးမွငျတာနဲ့ မတူတော့ ကနြျောတို့ အပွနျလှနျသုံးသပျနတေယျ။ ကနြျောတို့ ပါတီတခုခငျြးစီမှာလညျး ခပြွနတေယျ။ NUG လုပျရပျပျေါမှာ ကနြျောတို့လေးစားတယျ။ တခွားကိစ်စကို ဆှေးနှေးသှားရအုနျးမှာပေါ့နျော။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒီနရောမှာ စုပေါငျးဦးဆောငျမှုနရောမှာ အဓိကအဖှဲ့အစညျး တခုဖွဈတဲ့ KNU အဖှဲ့အစညျး ကိုမတှရေ့ပါဘူး။ အရငျက KNU က ဦးဆောငျမှုယူခဲ့ပွီး နောကျ ရှမျးက ဦးဆောငျမှုယူခဲ့ရတာပေါ့။ အခု စုပေါငျးဦးဆောငျမှုမှာ ရှမျးကတော့ ပွနျပါလာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကရငျကို မတှရေ့ဘူးပေါ့နျော။ ဘယျလိုအနအေထားဖွဈတာပါလိမျ့။
နိုငျအောငျမငေး ။. ။ အစတုံးက ကနြျောတို့ PPST စုဖှဲ့တုံးက KNU ကနေ အဖှဲ့ခေါငျးဆောငျတာဝနျယူခဲ့တယျ။ ဒုတိယတခါ RCSS ဆကျလကျတာဝနျယူခဲ့တယျ။ အခုတခါ မှနျပွညျသဈပါတီ ကို သူတို့တာဝနျပေးခငျြတယျ။ နောကျတခုက စုဖှဲ့မှုပုံစံကို သူတို့ပါတီထဲမှာ တငျပွသှားမယျ။ဒါကွောငျ့မပါဝငျနိုငျသေးတာပါ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျခငျဗြာ။
NCA လက်မှတ်ထိုး တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေ စစ်ကောင်စီနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့မရှိသေး